Nai Nai: Android အသုံးပြုသူတွေလက်ကိုင်ထားသင့် တဲ့ အကောင်းဆုံး Android Dictionary ၅မျိုး
Android အသုံးပြုသူတွေလက်ကိုင်ထားသင့် တဲ့ အကောင်းဆုံး Android Dictionary ၅မျိုး
Android အသုံးပြုသူတွေလက်ကိုင်ထားသင့် တဲ့ အကောင်းဆုံး Android Dictionary ၅မျိုး ကို ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။။ဒါတွေဟာဆိုရင် Eng Dictionary တွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။အင်္ဂလိပ်စာ တွေ လေ့လာသင်ယူတဲ့ သူများလည်း ဆောင်ထားသင့်တဲ့ Apkလေးတွေ ဖြစ်ပါတယ်။Eng to Eng ဘာသာပြန်နိူင်သလို၊တခြားဘာသာတော်တော်များများကို စကားလုံးတစ်လုံးချင်း၊တစ်ပိုဒ်ချင်းလည်း ဘာသာပြန်ပေးနိူင်တဲ့ apkများကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
1. Free Dictionary Org:
ဒီဟာလေးဟာဆိုရင်free dictionary လေးဖြစ်ပါတယ်။ဘာတွေလုပ်နိူင်သလဲဆိုရင်တော့ English definitionsတွေ, pronunciationတွေ, synonyms တွေနဲ့ spellingတွေ စတာတွေအသုံးပြုနိူင်ပါတယ်။
အင်တာနက်နဲ့ရှိမှ သုံးနိူင်သလို ၊ 0ffline မှာလည်း အသုံးပြုနိူင်ပါတယ်။
Download Link online: Free Dictionary Org
Download Link offline: Free Dictionary Org
2. ColorDict Dictionary Wikipedia:
ဒီappဟာဆိုရင် Wikipediaနဲ့ချိတ်ဆက်အသုံးပြုနိူင်သလို Google Dictionary နဲ့ Google Translateတို့နဲ့လည်း အသုံးပြုနိူင်ပါတယ်။အင်တာနက်ချိတ်ဆက်ထားမယ်ဆိုရင် ပိုအဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်။
အင်တာနက်ရှိမယ်ဆိုရင် ရှာချင်တဲ့ စကားလုံးတွေကို အချိတ်အဆက်မိမိ ချိတ်ဆက်ပြီး ရှာပေးနိူင်ပါလိမ့်မယ်။အသံနဲ့ပြောပြီးရှာဖွေနိူင်သလို ၊ စကားလုံးတွေရိုက်ထည့်ပြီးလည်း အလိုရှိရာ ရှာဖွေနိူင်ပါလိမ့်မယ်။အနီးစပ်ဆုံးစကားလုံးလေးတွေကို ယှဉ်တွဲဖော်ပြပေးထားတာမို့ အသုံးတည့်မှာတော့သေချာပါတယ်။တခြားဘာသာစကားများကိုလည်း Add-On ကိုသုံးပြီး ဘာသာပြန်တာတွေ ပြုလုပ်နိူင်ပါတယ်။Price: Free
Download Link: ColorDict Dictionary Wikipedia
3. Translator + Dictionary:
ဒီ app ဟာဆိုရင် ဘာသာတော်တော်များများကို ဘာသာပြန်ဆိုပေးနိူင်ပါတယ်။Translator ရော အဘိဓာန်အနေနဲ့ရော အသုံးချပေးနိူင်ပါတယ်။English, Russian, German, Italian, French, Japaneses, Chinese, Spanish, Czech, Koreanစာတဲ့ ဘာသာအတော်တော်များများကိုလည်း စိတ်ကြိုက် ရွေးချယ်နိူင်ပါတယ်။historyကို ပြန်လည်အသုံးချနိူင်အောင် ဖော်ပြပေးထားပါတယ်။
Download Link: Translator + Dictionary
4. Arcus Dictionary:
Android ဖုန်းတွေအတွက် အသစ်ထွက် Dictionary တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ တော်တော်စုံစုံလင်လင်ပါတဲ့ dictionary တစ်ခုဖြစ်ပြီး words, definitions နဲ့ synonymsစကားလုံးစုစုပေါင်း ၁၈၅၀၀၀ နှင့်အထက်ပါရှိပါတယ်။ တကယ်လို့ ကိုယ်သိချင်တဲ့ စကားလုံးတစ်ခုဟာ application ထဲမှာမပါခဲ့ဘူးဆိုရင်တောင်မှapplication မှတစ်ဆင့် အင်တာနက်ထဲမှာ ရှာဖွေနိုင်ဦးမှာဖြစ်ပါတယ်။ ရှာဖွေရာမှာလည်း စာရိုက်ရမှာပျင်းတဲ့ သူများအတွက် voice search ကိုအသုံးပြုပြီးရှာဖွေနိုင်ပါတယ်။ လိုချင်သူများအောက်မှာ ရယူနိုင်ပါတယ်။
Download Link: Arcus Dictionary
Arcus Dictionary Pro v1.7.2 for Android အားရယူရန်
5. Advanced English and Thesaurus:
ဒီ app ဆိုရင် ရှာဖွေချင်တဲ့စကားလုံးတွေကို လျင်လျင်မြန်မြန်နဲ့ ရှာဖွေပေးနိူင်သလို History တွေကိုလည်း နောက်ဆုံးစကားလုံး၅၀လောက်ကို မှတ်သားပေးထားနိူင်ပါတယ်။
စကားလုံးပေါင်း1.4 million အထိတောင် ရှာဖွေမူ့တွေ ပြုလုပ်နိူင်ပါတယ်။ မှန်ကန်တဲ့ အချက်အလက်တွေနဲ့ ပြုလုပ်ပေးနိူင်တာကြောင့် အသုံးပြုရလွယ်ကူစေပါတယ်။ Price:Free
Download Link: Advanced English and Thesaurus
Posted 4:21 PM by Nai Nai in Labels: ဖုန်းဆော့ဝဲများ
0 comment(s) to... “Android အသုံးပြုသူတွေလက်ကိုင်ထားသင့် တဲ့ အကောင်းဆုံး Android Dictionary ၅မျိုး”